Moderaterna oo ka soo horjeedsaday xakameynta ka macaashka adeegga guud - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ulf Kristersson afhayeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga moderaterna. sawir: Marcus Ericsson/TT
Moderaterna oo ka soo horjeedsaday xakameynta ka macaashka adeegga guud
La daabacay tisdag 8 november 2016 kl 14.28
Moderaterna ayaa ka soo horjeedsaday in la xadido ka macaashka adeegga bulshada ee shirkadaha gaar gaarka loo leeyahay.
Xisbiga Moderaterna ayaa ka soo horjeedsaday hindise ah in la xadido ka macaashka adeegga bulshada ee sameeyaan shirkadaha gaar gaarka loo leeyahay ee maamula xaruumaha danta guud.
In macaashka faa’ido ee shirkadahu ka helaan adeegga dadweynaha lagu so koobo boqolkii todo keliya waxaa ku taliyey baaritaan maanta soo bandhigay oo uu sameeyey Ilmar Reepalu oo ah baare dowladda u saartay in uu ukuurgala sida laga yeelayo ka macaashka adeegga guud ee bulshada.
Laakiin afhayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga moderaterna ayaa ku dooday in aysan suurto-gal aheyn in la meelmariyo hindiseyaasha baaritaanka balse ay baddelkeeda doonayaan in xisbiyada siyaasadda isku afgartaan sida laga yeelayo shirkadaha ka macaasha adeegga guud.
- Hindiseha noocaan ah ma abuurayo fursad is afgarad ah oo aan aaminsanahay in ay u wanaagsan tahay waddanka Sweden, ayuu yeri Ulf Kristersson.
Waxuu Ulf Kristensson ku eedeeyey baare Ilmar Reepalu in uu ku qafiifay macaashka faa’ido ee shirkadaha halka uu eegi lahaa waxtar kale ee shirkdaha ku soo kordhiyeen adeegga bulshada.
- Haddii lagu qafiiyo faa’idada shirkadahan helaan oo la egin waxtarkooda markas suurto-gal ma ahan in is afgarad arrintan lagalo xisbiyada Alliansen, ayuu yeri afhayeenka dhaqaalaha xisbiga moderaterna Ulf Kristersson.
Macaashka shirkadaha ee adeegga bulshada oo lagu taliyey in la xadido